Otú nyefee Symbian Ndi ana-akpo ka iOS
Symbian ka iOS: Nyefee Ndi ana-akpo dị mfe
> Resource> iOS> Symbian ka iOS: Nyefee Ndi ana-akpo dị mfe
Zutere egbochi mgbe ị chọrọ iṅomi gị Symbian kọntaktị ọhụrụ gị iOS ngwaọrụ, iPhone 6s ihe atụ? Ọ bụ ezie na mmadụ nwere ike ndụmọdụ ị na i nwere ike nyefee kọntaktị na ọ udiozi site Gmail ma ọ bụ Outlook, ọ bụ ya mere na-eweta nsogbu na ikike. Na ọ bụrụ na ị na-adịghị Gmail ma ọ bụ Outlook akaụntụ, ị ọbụna nwere ka aha ya n'ihu ị na-eme nyefe.
M na uche, na ụzọ kasị mma nyefee Symbian kọntaktị na iOS bụ ịchọta a ọkachamara software na nke ị nwere ike ozugbo nyefee Symbian kọntaktị na iOS ọsọ ọsọ na mfe. Dabara nke ọma, ebe a bụ ihe ekwentị transfer ngwá ọrụ, Wondershare MobileTrans, nke nwere ike inyere gị aka ime ọrụ ahụ na otu Pịa. Ego: a bụ zuru ndu-enyere gị aka mfe na n'enweghị nyefee gị data n'etiti ọ bụla ntị. Lelee ya.
Nyefee na Ndi ana-akpo si Symbian ka iOS
Ebe a na-abịa nkuzi. Ọ ga-eduzi gị idetuo kọntaktị site na Symbian ka iOS. Gaa na ịgụ ya.
Nzọụkwụ 1. Download na-agba ọsọ Wondershare MobileTrans
Nke mbụ niile, download na wụnye MobileTrans na kọmputa gị. Mgbe ahụ ẹkedori ya. Mgbe ahụ, bụ isi window-abịa n'ime n'anya gị. Mgbe ahụ, pịa na ekwentị ekwentị Nyefee iji bugote ekwentị transfer window.
Ke adianade do, ego ma ị rụnyere iTunes na kọmputa gị. Ọ bụrụ na, Wondershare MobileTrans ga-echetara gị iji wụnye ya.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị Symbian ekwentị na iOS ngwaọrụ gị PC
Na MobileTrans isi window, ị kwesịrị ị na jikọọ gị Symbian ekwentị nakwa dị ka iPhone gị PC n'otu oge. Mgbe a na ekwentị transfer ngwá ọrụ ejisie ịchọpụta na ngwaọrụ gị, gị na ngwaọrụ ga-egosipụta na windo dị ka screenshot dị ka n'okpuru.
E wezụga na, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ-ewepụ ihe niile kọntaktsị na ekwentị akwụkwọ gị iOS ngwaọrụ tupu nyefe, ị nwere ike nne Mmetụta oyi "Doro Anya data tupu oyiri" ke ala nri akuku.
Cheta na: Ọ na-akwado niile Nokia ntị na-agba ọsọ Symbian 40, Symbian 60 na Symbian ^ 3. The rektangulu "tụgharịa" button-enye gị ohere ịgbanwe ebe nke igwe.
Nzọụkwụ 3. Malite nyefee Symbian Ndi ana-akpo ka iOS
Site ndabara, MobileTrans kwere ka ị na-detuo kọntaktị, videos, ederede ozi, foto na music si Symbian (Nokia) ekwentị iOS ngwaọrụ. Nọgide nnọọ na-kọntaktị enyocha.
Ugbu a ọ bụ oge detuo kọntaktị. Kụrụ "Malite Copy". N'oge transfer ọganihu, jide n'aka na abughi nke gị ntị ịkwụpụ. Mgbe nyefe dị n'elu, pịa "OK".
Mgbe ị na-rụchaa nyefe, i ịga nke ọma n'ime-akpụ akpụ na Symbian kọntaktị gị iOS ngwaọrụ. Dum usoro dị nnọọ mfe ma ọ dị nnọọ na-ewe gị otu ma ọ bụ nkeji abụọ. Ọ bụ a nnọọ kemfe ekwentị transfer ngwá ọrụ.
Na mgbakwunye na-ebufe kọntaktị site na Symbian ka iOS, ị na-enwe ike iṅomi gị Symbian kọntaktị ekwentị, music, videos, foto na SMS ka Android ekwentị dị ka mma. E wezụga, i nwere ike ịkwaga a nnukwu ego nke data: kọntaktị, SMS, na-akpọ abanye, foto, music, videos na ngwa, site na otu Android ekwentị ọzọ.
Nke a video nkuzi ka ị na-aghọta nzọụkwụ ọsọ ọsọ na mfe.
Olee otú Gbanwee si gam akporo ka iOS
Otú nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Nokia
Otú nyefee si iPhone ka Android
Wondershare Nchekwa nchicha
Chebe gị onwe ozi mgbe ere ya ere, imegharị ihe maka iji ma ọ bụ inye onyinye gị ochie ngwaọrụ.
Chọrọ Downgrade si iOS 9 iOS 8.4? Olee otú ime ya
Otú nyefee Data si Blackberry ka iOS Devices
Olee otú Download Music Free maka iOS Devices
Top 10 Music Radio ngwa ọdịnala n'ihi iOS na Android
10 amamiihe atụmatụ ndị ị na Mkpa Ịmata banyere Apple iOS 9
Ihe unu na-amabeghị: 5 Jụụ Atụmatụ na Apple emeghị ịkpọsa na iOS 9
Olee otú Lelee Internet Speed ​​na android na iOS Devices
Otú nyefee Data si iOS ngwaọrụ ZTE ekwentị mkpanaaka na
Olee otú Jiri iOS emulator maka Android
Olee otú Iji Gụọ Old Facebook ozi Ozi na iOS